Ultrasonic Transducer, Xiinka Taxanaha gariirka, Ultrasonic Generator - Qianrong
Xalka ugu Fiican ee Codsiga Xiinkaaga
Ma yahay soo saaraha xirfadlaha ah ee cilmi baarista ultrasonic, awoodda transducer ultrasonic ee sarreeya iyo soosaarka Shiinaha
Waxaan ku yaalaa Hangzhou, oo u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee shanghai, oo leh iswaafajin siyaasadeed oo dhameystiran iyo wareegga habboon. Suuqa caalamiga ah, waxaan ku leenahay khibrad ganacsi oo qaan gaar ah.
QRsonic waxay diiradda saareysaa cilmi baarista iyo horumarinta qaybaha ultrasonic iyo codsiga. Sanadahan, mashiinada QRsonic waxay sumcad wanaagsan ka heleen macaamiisheena labada Shiinaha iyo suuqa adduunka.
QRsonic waa soo saare xirfadle ah dhammaan noocyada qalabka ultrasonic. Waxaan aqbali karnaa OEM & ODM, oo siineysa macaamiisha wadarta xalalka soo jeedinta ultrasonic, tijaabada mabda'a, soosaarka qaybaha iyo iwm.
20Khz Xiinka Customized Alxanka Horn la A ...
Joogtaynta 20khz Xiinka Warshadaha Xiinka ...
Joogtaynta Sare 35Khz 1000w Xiinka Xiinka E ...
Ultimate Copper Aluminium Beddelka 20Khz 300 ...
Nickel Mesh iyo Nickel Plate Alxanka 3000w 2 ...
20Khz Xiinka Qalabka Goynta Xiinka oo leh 60m ...
20Khz 1500w Ultrasonic Alxanka gudbiye leh ...
15Khz 2600w Awood Sare Ultrasonic Alxanka Alxanka ...
Hangzhou Qianrong Qalabaynta Qalabka Co., Ltd. waa soo saaraha xirfadlaha ah ee cilmi baarista ultrasonic, awoodda transducer ultrasonic transducer iyo wax soo saarka ee Shiinaha. Alaabtayada ugu muhiimsan waa transducer, qalabka korontada ee ultrasonic, alxanka alxanka ultrasonic, qaybaha anteenada siligga iwm. Waxsoosaarkan ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa dhinacyo kala duwan, sida alxanka caagga ah, alxamida birta, xiritaanka aan tolnayn iyo goynta iwm. Tan iyo markii la aasaasay Qalabka Qianrong, shirkaddu had iyo jeer waxay diiradda saartay baahida macaamiisha. Markaad sahamineyso suuqa gudaha ee Shiinaha, waxaan sidoo kale tusineynaa tikniyoolajiyadda shirkaddayada adduunka. Tayada iyo waxqabadkeeda ayaa caan ku ah warshadaha.
Falanqeeyaha Ultrasonic Transducer Impedance Falanqaynta ...
40Khz Ultrasonic Nano Spray Device leh Fr Sare ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Sayniska ...
35Khz Xiinka Xiinka Mashiinka Alxanka leh Digi ...
Beddelista Cirbadda Dhaqameed iyo Toddoba dunta ...
20Khz 2000w Xiinka Transducer xoojiyaha Assem ...
15 Khz Ultrasonic Alxanka Generator Soo-saare ...
Bixinta 30Khz Qalabka Jarida Ultrasound ee R ...